ဟက်ဇ် - ဝီကီပီးဒီးယား
Top to bottom: Lights flashing at frequenciesf= 0.5 Hz, 1.0 Hz and 2.0 Hz, i.e. at 0.5, 1.0 and 2.0 flashes per second, respectively. The time between each flash – the period T – is given by 1⁄f (the reciprocal of fတမ်းပလိတ်:Px1), i.e. 2, 1 and 0.5 seconds, respectively.
﻿ဟက်ဇ် (သင်္ကေတ - Hz) သည် ကြိမ်နှုန်း (frequency) ၏ ယူနစ် ဖြစ်သည်။ ၎င်းယူနစ်သည် SI ယူနစ် ဖြစ်သည်။ ဟိန်းနရစ်ချ် ဟတ်ဇ် (Heinrich Rudolf Hertz) ၏ အမည်မှ ဤယူနစ် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ Heinrich Rudolf Hertz သည် လျပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ၏ ဖြစ်တည်မှုကို တွေ့ရှိခဲ့သည့် ပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။ Hetz ကို kilohertz (103Hz, kHz), megahertz (106Hz, MHz), gigahertz (109Hz, GHz), terahertz (1012Hz,THz), petahertz (1015Hz, PHz), and exahertz (1018Hz, EHz) စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ဖော်ပြသုံးစွဲလေ့ ရှိသည်။
အချို့သော ယူနစ်များသည် sine waves နှင့် ဂီတဆိုင်ရာ tones များကို ဖော်ပြရန် အသုံးပြုသည်။ အထူးသဖြင့် ရေဒီယိုနှင့် အသံဆိုင်ရာတို့တွင် ဖော်ပြသုံးစွဲလေ့ရှိသည်။ ထို့ပြင် ကွန်ပျူတာနှင့် အခြားသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ဖော်ပြရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုသည်။
ကွန်ပျူတာများတွင် CPU ၏ Clock rate ကို ဖော်ပြရာတွင် hertz ဖြင့် ဖော်ပြသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟက်ဇ်&oldid=478368" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၂:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။